သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမော်ကွန်းတိုက် - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်း
Peace Tandem - ဘာသာစကားဖလှယ်ခြင်းဖြင့် ပဋိပက္ခကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2022 0
'Peace-Tandem' လက်စွဲစာအုပ်သည် ပဋိပက္ခသီအိုရီ၏ နိဒါန်းကို ပေါင်းစပ်ထားသော ဘာသာစကား သင်ယူမှုနည်းလမ်းကို လက်တွေ့အသုံးချနည်းအတွက် လက်တွေ့ကျသော အကြံဉာဏ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Martin Luther King နှင့် Montgomery Story – သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် လေ့လာမှုလမ်းညွှန် (Fellowship of Reconciliation)
ဇန်နဝါရီလ 15, 2022 0
Rev. Martin Luther King, Jr. ၏ အသက်နှင့် အမွေအနှစ်ကို ဂုဏ်ပြုရန် ပြင်ဆင်နေချိန်နှင့် မကြာမီ Black History Month ကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Fellowship of Reconciliation သည် အခမဲ့ အွန်လိုင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် လေ့လာမှုအသစ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျော်ကြားသော 1957 ရုပ်ပြစာအုပ်၊ Martin Luther King နှင့် Montgomery Story တို့နှင့်အတူ လိုက်ပါရန် လမ်းညွှန်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
နိုဝင်ဘာလ 13, 2021 0
အကြမ်းမဖက်မှုဆိုင်ရာ မေတ္တာဗဟိုဌာနမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဤကာတွန်းတိုလေးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရာတွင် အကြမ်းမဖက်မှုသည် မည်ကဲ့သို့ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း ရှင်းပြသည့် အလုပ်သမားပျား Buzz နှင့် တွေ့ဆုံပါ။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
သြဂုတ်လ 22, 2021 0
ငြိမ်းချမ်းရေးပြတိုက်များသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပြသခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ခြင်းမှတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်သောအကျိုးအမြတ်မယူသောပညာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြတိုက်များနိုင်ငံတကာကွန်ယက်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်၊ ညီလာခံလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောဆောင်းပါးများအပါအ ၀ င်ငြိမ်းချမ်းရေးပြတိုက်များနှင့်ဆက်စပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းထားသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
သြဂုတ်လ 7, 2021 0
ဗွီဒီယိုအသစ်များကို United Religions Initiative ၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်သော Nuclear-Weapon-Free World၊ Voices မှတီထွင်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဗုံး ... ဝေး !: ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုနှင့်နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးစူးစမ်းသောစီမံကိန်းအသစ်
ဇူလိုင်လ 22, 2021 0
ဗုံး…ဝေး! ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအရပ်သားများအပေါ်ဝေဟင်မှတိုက်ခိုက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပြန့်ပွားမှုမည်သို့တုန့်ပြန်သည်ကိုလေ့လာရန် The Peace Museum UK ၏ထူးခြားသောစုဆောင်းမှုကိုအသုံးပြုမည့်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ထုတ်ဝေမှုအသစ် - ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးခြင်း
ဇူလိုင်လ 16, 2021 0
“ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်သင်ကြားခြင်း” စာအုပ်သစ်သည်ကျောင်းသားများနှင့်ပညာရှင်များအားကမ္ဘာနှင့်အ ၀ ှမ်းရှိငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
နိဒါန်း ၂ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး - ဗီဒီယိုစီးရီး
ဇြန္လ 1, 2021 2
# Intro2Disarmament ဗီဒီယိုစီးရီးတွင်ဗွီဒီယိုအတိုငါးခုပါ ၀ င်သည်။ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးသည်ပိုမိုလုံခြုံသော၊ ပို၍ ငြိမ်းချမ်းသော၊ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ခြင်း simulation သင်ယူခြင်းလူမျိုးရေးစည်းစိမ်ကိုကွာဟမှု
မေလ 31, 2021 0
Bread for the World သည်ပုံဖော်ခြင်းကိုလူမျိုးရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှု၊ ငတ်မွတ်မှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုများကိုလူတို့အားနားလည်စေရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပုံဖော်ပေးသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မေလ 25, 2021 0
Facing History & Ourself သည်ကျောင်းသားများအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏အဖြစ်အပျက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ခရီးသွားခြင်းနှင့်စုရုံးခြင်းများကိုကန့်သတ်သည့်အချိန်တွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်ရန်လမ်းညွှန်ရန်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]